Ifulethi elisha elisha elihle lonke - I-Airbnb
Ifulethi elisha elisha elihle lonke
Linkou District, New Taipei City, I-Taiwan
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Lily
Ifulethi lami litholakala eSigabeni 1, Wenhua 3rd Road, Linkou District, New Taipei City, Taiwan, eduze neRotary Park kanye neGuobin Cinema. Ifulethi liseduze nesiteshi sezindiza i-MRT A9 kanye ne-Mitsui outlet, ekulungele ukuhamba nokuthenga. Ifulethi liqhele ngemizuzu eyi-15-20 ukusuka esikhumulweni sezindiza nasenkabeni yedolobha. Ifulethi lonke lesitayela sezwe lesimanje lesitayela saseYurophu lenza abantu bazizwe befudumele futhi benethezekile ngokushesha nje lapho bengena emnyango, okuvumela wena, umndeni wakho nabangane ukuba nibe nomuzwa wenjabulo ekhaya ngenkathi usohambeni. Uma unomngane nawe, lapho ababili behamba ngesikhathi esisodwa, siphinde sinikeze amafulethi esakhiweni esifanayo ukuze sibuze. Kubahlali, siphinde sikunikeze isevisi yamahhala yokushiya ukusuka efulethini ukuya esikhumulweni sezindiza. Uma unesidingo, ungaxoxa ngaso, futhi sizozama ngakho konke okusemandleni ethu ukusiza ukusifinyelela.
Amandla: (1~4 abantu)
Isivakashi esengeziwe: $550 TWD / ubusuku (Uma izivakashi ezingaphezu kwezi-4 ngomuntu ngamunye, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-6 ubudala ngeke zibalwe)
Idiphozithi: $5000 TWD
Ifulethi lisesiteshini sezindiza i-A9 Airport MRT, nezinto zokuhamba ezikahle. Kuthatha cishe imizuzu eyi-15-20 ukuya edolobheni laseTaipei noma esikhumulweni sezindiza. Eduze kukhona amapaki, iGuobin Cinema Xinjing Plaza, izitolo ezidayisa ukudla, izitolo zobuhle kanye nama-hypermarkets. Imizuzu emi-5 ~ 10 ukuya enxanxatheleni yezitolo enkulu kunazo zonke iMitsui eNorth City. Izakhamuzi zihlinzeka ngesevisi yamahhala yokwehla ukusuka efulethini ukuya esikhumulweni sezindiza. Ifulethi liklanywe kahle futhi lihlotshiswe futhi lihlome ngokuphelele.
Indawo yomlilo yangaphakathi
Isiqandisi, i-microwave, isitofu sasekhishini, umshini wokuwasha, i-TV, i-WiFi
Umshini wekhofi we-Nespresso capsule
Isihlalo esiphezulu sezingane
Ikhonsoli yegeyimu (iyatholakala ukuze uyibolekwe)
Ifulethi lisesiteshini sezindiza i-A9 Airport MRT, nezinto zokuhamba ezikahle. Kuthatha cishe imizuzu eyi-15-20 ukuya edolobheni laseTaipei noma esikhumulweni sezindiza. Kukhona amapaki, Amasinema Wezivakashi Zezwe, izitolo ezitholakala kalula, izitolo zobuhle kanye nama-hypermarkets aseduze. Imizuzu engu-2 uhamba ngezinyawo ukuya eGuobin Cinemas Xinjing Plaza Shopping Center, 5~10 imizuzu yokuhamba ngezinyawo ukuya eMitsui Outlet Shopping Center
大家好！我是Lily :) 我和先生都是非常喜歡交朋友的人，一直希望陪伴我們的小寶貝們健康成長的同時又可以一起經營溫馨的交友空間，所以我們選擇在住家附近經營民宿，以便隨時給予住宿的朋友們最好的服務及旅行規劃。
Ifulethi lilungele yonke iminyaka. Imindeni enezingane yamukelekile ukubhukha. Sizolungisa izinto zezingane, amathoyizi kanye nezincwadi zezingane. Ngesikhathi esifanayo, umnikazi wendawo angasiza ekuhleleni uhambo ukuze akusize uqedele uhambo lwakho oluya e-Taiwan kalula kakhudlwana.
Ifulethi lilungele yonke iminyaka. Imindeni enezingane yamukelekile ukubhukha. Sizolungisa izinto zezingane, amathoyizi kanye nezincwadi zezingane. Ngesikhathi esifanayo, umnikazi…
Hlola ezinye izinketho ezise- Linkou District namaphethelo